Xhuma iMicrostation V8i ngeenkonzo zeWMS-iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Xhuma i-Microstation V8i ngeenkonzo ze-WMS
Geospatial - GISGvSIGGIS asiboniseMicrostation-Bentley
Ngethuba elidlulileyo si bonisa indlela ye-archaic njengoko kwakunokwenzeka ukudibanisa neenkonzo ze-OGC usebenzisa i-Microstation, ndiyakhumbula ukuba uKeith wandixelela ukuba inqaku elilandelayo liza kuba nezixhobo.
Ukufikelela, kuhlala kusenziwa ngomphathi we-raster ngoku, ukongeza kwifayile ye-raster kunye nenkonzo yemifanekiso, inketho yemephu yewebhu (WMS) iyavela. Kule nto ayimfuneko Imephu yeBentley, sele ibandakanyiwe kwiMicrostation, ewe, kufanelekile V8i okanye njengoko kuthiwa yi-v8.11.
Ixesha lokugqibela Ndacacisa indlela iinkonzo zomsebenzi ezisebenza ngayo ngoku siya kubona kuphela indlela yokulayisha i-wms.
Xa ukhetha ukhetho, iphaneli ibonakala apho i-url yenkonzo ikhethiweyo, ngoko ke nayiphi inkonzo yenkonzo epapashwe ngemigangatho ye-OGC nge-wms ingadibana.
Kule meko, yabona ukuba kunokwenzeka ukuba udibanise neenkonzo epapashwe yiNcwadana I-GIS nge-wms, ekule meko ingafumaneka kwi-localhost.
Nje ukuba inkonzo ikhethwe, inkqubo iyajonga ukuba zeziphi izicwangciso ezinqwenelekayo, iodolo, isitayile kunye nokukhethwa kokukhanya. Ekunene kukho ipaneli yezicwangciso ngokubanzi, kubandakanya ingqikelelo apho ikhoyo umaleko, ifomathi yomfanekiso, ukungafihli, uluhlu, phakathi kwabanye. Kukwakho ne-tab yokujonga kwangaphambili, esebenzayo kakhulu.
ngoko ifayile ingagcinwa kunye nokongezwa kwama-xwms kwaye kamva ingabizwa.
Ukuhamba kancinci kodwa ekugqibeleni oku kwafika kwi-Microstation, lo msebenzi mnye ngaphambi kokuba sibone oko kwenziwa asibonise, GvSIG, Umhlaba ka-Google.
Screen Castle, gcina isikrini kwi-intanethi